နောက်ဆုံးကျတော့ တော်လှန်ရေးလူပြက်ကလေးတွေ ဖြစ်သွားတယ် – Nyang Media
ဒီဇင်ဘာ 22, 2019
KNUH/ TAG / ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် (ဝဲ) AA စစ်ဦးစီးချုပ် (ယာ)
အခု ဒီနေ့ရခိုင်တပ်တွေ ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာ သူများပေးစာကမ်းစာနဲ့ စိန်နားတောင်းအရောင်နဲ့ ပါးပြောင်နေတာပါ။ စိန်နားတောင်းအရောင်နဲ့ ပါးပြောင်တဲ့လူတိုင်းဟာ ဒီလိုပဲ စိတ်ကြီးဝင်တတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ . . .
ရခိုင့်တပ်တော် (AA) စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရခိုင်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တော်လှန်ရေးနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာနေခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုံးသပ်ပြောကြားချက်ကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
MNM – ကျနော်တို့ကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှသာလျှင် ဒီကနေ့ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ဆီကို သွားလို့ ရပါမယ်။ ဒါက ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ ပြောချင်တာပေါ့။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့က၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အားနည်းချက်အသီးသီး ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ဝန်ခံပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့က အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတော့ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
လူတွေက ကာလတစ်ခု၊ အချိန် တစ်ခုအထိမှာ ဒီလိုစိတ်ကြီးဝင်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ကြီး ဝင်တတ်တယ်ဆိုတော့ ဒီလိုစကားမျိုး ပြောတာပေါ့။ ဒီလိုစိတ်ကြီးဝင်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာ ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ …
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပြုမူပြောဆိုခြင်းမျိုးကို ကျနော်တို့ သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကတော့ တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံအရ တော်လှန်ရေးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးရဲ့ သူတို့ဘဝရှင်သန်မှုအတွက် အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ သမိုင်းတွေကို သေသေချာချာသိဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အဓိက က အဲဒါပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – KNU တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် တော်လှန်ရေးဖြတ်သန်းမှုမှာ AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောသလို အပစ်အခတ်ရပ်ထားပြီး လူကြီးပိုင်းတွေ ဝိုင်သောက်ရင်း အချိန်ဖြုန်းခဲ့တာ ဘယ်လောက် များရှိပါသလဲ။
ဒီနေ့ရခိုင်တွေ စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ကရင်တွေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) က မက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျနော် တို့ကရင်တွေက တော်လှန်ရေး စလုပ်တုန်းက သီးခြားကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ တာထွက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် …
MNM – (ရီသည်) အဲဒါတော့ဗျာ . . . ခင်ဗျား . . . ဒါတွေက နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ တွေ့ကြဆုံကြတဲ့အခါ ဒီလိုပဲဧည့်ခံကြတာ၊ ပြုကြတာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ်တိုင်ကရော ဝိုင်ခွက်မကိုင်ဘူးလား။ ကျနော်တို့က အထောက်အထားနဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့တောင်တင်ပေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုဟာမျိုးကို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြောတယ်ဆိုတာ၊ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လေဗျာ “သူ့ဂုဏ်ကိုယ်နှိမ့် ကိုယ့်ဂုဏ်နိမ့်၏။ သူ့ဂုဏ်ကိုယ်မြှင့် ကိုယ့်ဂုဏ်မြင့်၏” ဆိုတာ။ အဲဒီလိုရှိပါတယ်။ ဒီတရားနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ အဲဒီလို ပြောဆိုပြုမူတာတွေဟာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီကဘာရလဒ်ရသလဲဆိုတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပိုပြီးတော့ဝေးကွာပြီး Positive မဖြစ်တဲ့အဖြေပဲထွက်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ပြောဖို့မသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောတဲ့ အဲဒီစကားထဲမှာ “သူတို့အလုပ်မကြိုးစားဘူး။ ကျနော် သေချာပြောရဲတယ်” ဆိုတဲ့စကားပါတော့ ဒီစကားအပေါ် KNU အဖွဲ့ရဲ့ ဝါရင့်တော်လှန်ရေးသမား တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
MNM – ဒါကတော့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းဖြတ်သန်းမှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ နဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေက ကာလတစ်ခု၊ အချိန် တစ်ခုအထိမှာ ဒီလိုစိတ်ကြီးဝင်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ကြီး ဝင်တတ်တယ်ဆိုတော့ ဒီလိုစကားမျိုး ပြောတာပေါ့။ ဒီလိုစိတ်ကြီးဝင်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာ ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ အများကြီးရှိခဲ့တာပဲ။ ဖဆပလဆို အနှစ် (၄၀) တည်မြဲမယ်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖဆပလ ဟာ (၁၄) နှစ်ပဲခံတယ်လေ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီလည်း ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပဲ။ ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးကို သူတို့ဦးဆောင်မှ အောင်မြင်မယ်ဆိုပြီး ကာလတစ်ခုမှာ အတိအလင်းအကြီးအကျယ် ပြောခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက အခြေအနေတစ်ခု စိုးမိုးမှုရတဲ့အခါ လူတွေက စိတ်ကြီးဝင်တတ်တယ်လေ။ အဲဒီလို စိတ်ကြီးဝင်တတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ သူတို့ဖြတ်သန်းမှုဟာ ဒါက သမိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းဆိုင်သလို ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောတဲ့အထဲမှာ “ဟိုဘက်မှာ ၁၅ နှစ်လောက် အပစ်ရပ်ထားတယ်။ ၁၅ နှစ် လောက် လူကြီးတွေက ချမ်းသာနေတယ်။ ရဲဘော်တွေက အချိန်တွေလောင်ကျွမ်းပြီး ဘဝတွေပျက်စီးသွားတယ်” ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါတော့ KNU ရဲ့ တော်လှန်ရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့ယှဉ်ပြီး ဒီစကားအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
MNM – ကျနော်တို့တော်လှန်ရေး အတွေ့အကြုံအရတော့ တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးမှာ အနည်းအပါးတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါ ဘယ်တော်လှန်ရေး၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို မသန့်စင်မှု လုံးလုံးကင်းတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါကတော့ ကျနော် တို့လက်ခံပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့က အကောင်းဘက် ကရှုမြင်ပြီး အပြုသဘောနဲ့ ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကရင်အကြောင်းပဲပြောကြမယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေ ကျနော့်မျက်စိအောက်မှာတင် အသက်စွန့်သွားခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို အမျိုးသားရေး ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်စွန့်သွားခဲ့ကြတာ ခုထက်ထိ ကျနော့်မျက်စိထဲကမထွက်ပါ ဘူး။ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အဆက်ဆက် ကျနော်တို့မျက်စိအောက်မှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်သွားခဲ့ကြတယ်။ ရာသက်ပန်တော်လှန်ရေးသမားဆိုတဲ့ ဘဝကိုခံယူသွားကြတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အညတရရဲဘော်တွေလည်း ဒီလိုပဲ။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေလည်း ဒီလိုပဲ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြတာပဲ။ ဒါတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – တော်လှန်ရေးဖြတ်သန်းမှုအရ စစ်ရေးဗျူဟာပိုင်းမှာကြည့်ရင် KNU မှာလည်း ပြောင်မြောက်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အရေးပါတဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှု သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လိုကောက် ချက်ချလို့ရနိုင်မလဲ။
MNM – ကျနော်ပြောချင်တယ်ဗျာ။ သူတို့အနေနဲ့က လက်ရှိအခြေအနေဟာ ရုပ်ဝတ္ထုအရ တစ်စုံတရာ ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာ လက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေ ဖော်နိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာ ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတာ သုံးသပ်ဖို့လိုမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီလို နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ၊ တော်လှန်ရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ တက်လာပြီးတော့ တစ်စုံတရာအခြေအနေပေးတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့ ‘ဇမ္ဗူမှာတစ်လူသာရှိတယ်’ ထင်တဲ့လူတွေဟာ နောက်ဆုံးကျတော့ နိုင်ငံရေးလူပြက်ကလေးတွေ၊ တော်လှန်ရေးလူပြက်ကလေးတွေ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့တော်လှန်ရေး အတွေ့အကြုံ၊ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအရ အများကြီးတွေ့ခဲ့ပါပြီ။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိနိုင်ငံမှာ ICJ ကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေရှိတော့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်တပ်တော်အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
MNM – ကျနော်တို့ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးက တော့ တစ်မျိုးသားလုံး၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံး စည်းလုံးညီညွှတ် ဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ ဒါကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အစ္စရေးနိုင်ငံကိုပဲ ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ပါ။ အစ္စရေးပြည်သူတွေဟာ လေးသန်းကျော်၊ ငါးသန်းလောက်ပဲရှိ ပါတယ်။ သူတို့ရင်ဆိုင်ရသူတွေက သန်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေပါ။ ဓနအင်အားအရရော၊ လက်နက်အင်အားအရရော၊ လူအင်အားအရရော လူသန်းတစ်ရာကျော်ကို လူလေးငါးသန်းက ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ အဲဒီတော့ အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေက တစ်လုံးတစည်းတည်း၊ တစ်စိတ်တဝမ်းတည်း ညီညွှတ်တဲ့အတွက် သူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ အဲဒီဟာကို ကျနော်တို့ ဥပမာယူဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံက အစိုးရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး၊ တပ်မတော်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။
တကယ်တမ်းတော်လှန်ရေး လုပ်လာတဲ့အခါကျ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံအရ၊ တော်လှန်ရေးကမွေးဖွားလာတဲ့ အတွေးအခေါ် အသိတရားတွေအရ ဒါဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတိုင်းပြည်ကနေ ကျနော်တို့ကရင်တွေ …
ဒီတိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးပါပြီး ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အရေးကိစ္စဖြစ်သွားတာ။ ကျနော်တို့ဒီဟာကို မှန်မှန်ကန်ကန် မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့တိုင်းပြည် အများကြီးအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တချို့က ဒီလိုပြောတဲ့အပေါ်မှာ လက်မခံနိုင်ကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါလည်း သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ပဲ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ လူ့အခွင့်အရေးအရလည်းပြောပါ၊ တရားဥပဒေအရလည်းပြောပါ၊ ဒါပေမယ့်အမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကလည်း ပြောဖို့လိုတယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို သိဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်အလေးအနက်ထားပြီး ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းက တဖက်မှာ ICJ ကြောင့် အလုပ်ရှုပ်သွားချိန်၊ တပ်မတော်ကလည်း ကိုယ်ရှိန်သတ်ရချိန်မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း စစ်ရေးတင်းမာမှုမှာ ရခိုင်တပ်တော် AA အတွက် နိုင်ငံရေးအရရော စစ်ရေးအရပါ အသာရမှု အနည်းငယ်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင် သလဲလို့ မေးတာပါ။
MNM – ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုမမြင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကိုပြောချင်တာက ဒီကနေ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ အဓိကရန်သူဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား မြင်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က ရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသတစ်ခုလုံး အနာဂတ်မှာပျောက်သွားမယ့် အနေအထားကို နိုင်ငံတကာက ဦးတည်နေတယ်။ ဒါကိုကျနော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ဖို့လိုတယ်။ ရခိုင်ဆိုတာ ရှေးအစဉ် အဆက်ကတည်းက ကျနော်တို့နဲ့ အတူတကွနေထိုင်လာကြတဲ့ မိသားစုတွေဖြစ်တယ်၊ ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တယ်၊ ဘဝတူတွေဖြစ်တယ်၊ ကံတူအကျိုးပေးတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့ ဒါ တစ်စည်းတလုံးတည်း ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အဓိကရန်သူဟာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ ဒီကနေ့ ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ လိုပါတယ်။ တော်လှန်ရေး တစ်လျှောက်မှာ မိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိရင်တော့ ရေရှည်သွားလို့ မရပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်း ရန်သူအစစ်ကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ တရုတ်ကလုပ်နေတဲ့ ကျောက်ဖြူစီးပွားရေးဇုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ “ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်းကြောင့် ပြည်သူလူထု ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အဓိက တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတာက နေပြည်တော်ဖြစ်တယ်။ ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာတိုင်း တရုတ်ကို ရန်သူလိုလှမ်းကြည့်တယ် ဆိုတာ လွဲချော်နေတယ်။ မှားယွင်းနေတယ်” ဆိုပြီးပြောထားတာပါ။ ဆိုတော့ သူ့စကားအရ “ရန်သူအစစ်” ဆိုတဲ့ကိစ္စကို တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ပေးပါဦး။
MNM – ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီနေ့ရခိုင်တွေ စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ကရင်တွေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) က မက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျနော် တို့ကရင်တွေက တော်လှန်ရေး စလုပ်တုန်းက သီးခြားကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ တာထွက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းတော်လှန်ရေး လုပ်လာတဲ့အခါကျ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံအရ၊ တော်လှန်ရေးကမွေးဖွားလာတဲ့ အတွေးအခေါ် အသိတရားတွေအရ ဒါဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတိုင်းပြည်ကနေ ကျနော်တို့ကရင်တွေ သီးခြားခွဲထွက်ပြီးနေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘဝပေးသင်ခန်းစာတွေအရ သိလာရတယ်။ ကျနော်တို့ စုပေါင်းနေခြင်းကသာ တိုင်းပြည်ဟာ တစ်စည်းတလုံးတည်း ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို သိလာခဲ့တယ်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို သွားမယ်ဆိုတာကို ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၀ လောက်ကတည်းက ကျနော်တို့ကရင်တွေ အဓိကထားပြောခဲ့ကြတာပါ။ ဒါတွေက သမိုင်းမှာ မပေါ်ခဲ့လို့သာ၊ ကျနော်တို့အဲဒီအတိုင်းခံယူပြီး ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်းပြောပေးပါဦး။
MNM – ဒီလိုပေါ့ဗျာ၊ အခု ဒီနေ့ရခိုင်တပ်တွေ ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာ သူများပေးစာကမ်းစာနဲ့ စိန်နားတောင်းအရောင်နဲ့ ပါးပြောင်နေတာပါ။ စိန်နားတောင်းအရောင်နဲ့ ပါးပြောင်တဲ့လူတိုင်းဟာ ဒီလိုပဲ စိတ်ကြီးဝင်တတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ဘယ်လိုပျောက်လို့ ပျောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့ သမိုင်းအတွေ့အကြုံအရ ဒီလိုပဲတွေ့ခဲ့တာပဲ။
Tags: AA, KNU, ကရင်, တိုင်းရင်းသား, တော်လှန်ရေး, ရခိုင်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထဲကပဲ အင်အားကြီးသူတွေက ဘာသာရေးအရ ဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်
AA ကို မတရားဘူးဆိုတာ ပြောလာကြတာရှိတယ်